Serge Gnabry Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
musha NYAYA DZEEEOPEAN Serge Gnabry Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius iyo inozivikanwa nezita racho "Fashoni Icon". Our Serge Gnabry Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pezita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hungu, munhu wose anoziva nezvekufamba kwaanoita kumutambo webhola. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezveOle Serge Gnabry's Biography iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Serge Gnabry Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Family Background
Serge David Gnabry akaberekwa musi we 14th waJuly 1995 kuna amai vake, Birgit Gnabry uye baba, Jean-Hermann Gnabry muStuttgart, Germany.
Kunyange zvazvo Serge Gnabry akaberekerwa muStuttgart, kuSouthwest German, zvisinei, vashomanana chete ndivo vanoziva nezvemuzinda wake weAfrica uyo wakanyorwa kuna baba vake Jean-Hermann.
Haana Kudzokera Kusha:
Jean-Hermann aimbova mutorwa kubva kuIvory Coast uyo aingoronga kuenda kuGermany kune vamwe kuti adzidze mutauro. Aive netariro yekudzoka kunyika yake yekuAfrica uye kudzidzisa chiJerman kune vamwe.
Nhamo, Jean-Hermann haana kudzokera kuIvory Coast. Ari muGermany, akasangana ndokudanana naBirgit uyo akazobereka mwanakomana wavo anodikamwa Serge Gnabry. Vose Jean-Hermann naBirgit vakasarudza kuroorwa, nokudaro vachipa Jean-Hermann chikwata chekugara muEurope. Chisarudzo chaJean-Hermann chokuramba muGermany ndechekuita kuti mwana wavo wechidiki webhora afambe rwendo rwakanaka.
Serge Gnabry Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwekutanga
Serge Gnabry akatanga kunze mumitambo asingambodi kuva mubhokisi. Akatanga sa sprinter ane tarenda uyo akatora kufema kubva kuJamaican akagara muchengeti sprinter uye wenyika rekodhi Usain Bolt.
Pakutanga, Serge aida kuzomira kune sprinter yenyika iyo yaifunga kuti yaizopa kwaari mukana wekutarisana Usain Bolt. Maererano nemishumo, zvinyorwa zvinoramba zvichitevedzwa ne Usain Bolt vakamanikidza Serge Gnabry kuti asiye sprinting uye akasarudza kusarudza bhora.
Kunyangwe mushure mekuchinja kwemoyo, kutsunga kwaGnabry kuva muchengeti wepamutambo kwakanga kusiri kungofanirwa kunonoka.
Serge Gnabry Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Basa Rokutanga Upenyu
Bhora rakaperekedzwa Serge Gnabry kubva paudiki hwake. Pazera remakore mana, akabudirira kunyora neboka rake, TSV Weissach. Nemhaka yokuti Serge akaita zviri nani kune vamwe vana vose, akachinja mapoka evechidiki pachivande kusvikira awana kambani yekwikwidzi inogona kufarira kwaari.
Pazera remakore mashanu akaisa jersey ye TSF Ditzingen. Pazera remakore 6, akatanga kutamba Hemmingen. Yakanga iri panguva ino kufarira kubva kubhanga guru rakauya. Serge akasarudza kubatana naVfB Stuttgart yakasara kwemakore akawanda.
Musangano Mesut Ozil:
Paanenge achida kubatana neboka rakakura revechidiki vechidiki, Serge aizowana nguva yakatarisa kuti aone kutamba kwechikwata chechikwata. Gnabry pazera re10 kamwe akamboita somukomana-mukomana aifara Mesut Ozil uyo aibatanidzwa mune imwe yezvikwata zvevechidiki pedyo neguta rekwake.
"Ozil ndiye akanga ari muchengeti wepamutambo uye ndakawana mufananidzo naye kare kare" Akati Gnabry.
Akange asina makore e-10 aiziva kuti aizobatana pamwe chete uye achitamba pamwe naMesut Ozil rimwe zuva kuEmirate. Serge Gnabry hope dzake dzakazopedzisira dzaitika.
Serge Gnabry Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Paaiva muVfB Stuttgart, Serge Gnabry akaenderera mberi achienderera mberi sekutsunga uye kuzvitenda kwaakazova maziso ake munguva yehuduku hwake.
Achiita nzira yake kuburikidza nemapoka, imwe kirabhu yeChirungu inoda kuvhima matarenda echidiki akamuona. Iyo yaiva Arsenal!. Serge akabvuma kutengesa kwavakaita sezvaaifunga kuti aifanira kuramba achiita zvekutsvaga kwebhora muLondon.
Yakatengeswa Mu 2010 Asi Yakanunurwa Mu 2011:
Muna 2010, VfB Stuttgart akabvumirana kutengesa Gnabry kune £ 100,000 kusvika Premier League neArsenal. Serge Gnabry uyo akafadzwa nekusangana naMesut Ozil akachengetedza kuti chibvumirano chakaitika nokukurumidza.
Waizviziva here? Serge akasayina Arsenal kunyange zvazvo akanga asingakodzeri kubatana navo nekuda kwezera rake (aingova 15 chete). Zvakanaka, akasaina gore asati apihwa kuTomber London team
Paaiva paArsenal, Gnabry akaratidza mamwe maitiro anoshamisa uye akazvikwidziridza kumakwikwi ekurutivi rworudyi pamberi pekuzvarwa kwake 18th. Pamakore e17 nemazuva 98, akava wechipiri-mutambi wechidiki mumusangano wenhau pashure pacho Jack Wilshere.
Gnabry anonakidza kutanga kwe 2013 / 2014 svondo yakaguma pakusarudzwa kwake kune 2013 Golden Boy Mubayiro uye anopa chibvumirano chegore rechishanu neArsenal.
Zvinosuruvarisa, zvinhu hazvina kufamba zvakanaka mukurwa kwake kuti ave muchechi yekutanga yeboka. Serge Gnabry mumutambo we 2014 / 2015 akamuona ari kutambudzwa nekukuvara kwemabvi akakomba akazoita kuti atadze kutamba nebhola kwegore.
A Premier Premier Surplus:
Paakagadzirisa kubva pamabvi ake, Gnabry uyo aisakwanisa kukwikwidzana nemakwikwi akaoma emukwata weArsenal wokutanga akazviona achikweretwa kunze kweWest Bromwich Albion.
Paaiva kuWestBrom, Serge Gnabry akanga achiri kutambura uye aifungidzirwa kuti akadarika kudiwa kwechikwata. Panguva ino, aiziva kuti Premier League yakanga isiri kudana kwake. Gnabry paanoyeuchidzwa pachikwereti akasarudza kuenda kuGermany uko akabatana naWerder Bremen.
Serge Gnabry Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
PaSV Werder Bremen, Gnabry akatanga kuona kurota kwake kuva kwechokwadi. Izvi zvakauya paakaisa tarenda rake rekare remitambo yekushandura kushandisa. Gnabry akatanga kutora masikati, kushorwa uye kunyange avo vaaifambidzana navo pamwe neainzi "Turbo Kurumidza ". Pasi pane vhidhiyo yaSerge Gnabry anoshamisika vashandi vake veboka pamwe neTurbo Speed ​​yake.
The International Rise:
Gnabry akaisa nzvimbo yake mumoyo yevafudzi paaiita zvakanaka kuGermany mune zve XLUMX Summer Summer. Yakanga iri mutambo yakapa nyika yake sirivha yesirivha. Gnabry akawana zvinangwa zvenyika yake uye akazopedzisira ava mubatanidzwa wepamusoro scorer pamwe nemumwe waaifambidzana naye Nils Peterson. Kuti atore nyika yake yose, Gnabry mu2016 akatungamirira chikwata chake cheGermany U2017 kuenda kuEuropean Under-21 Championship kukunda.
Izvo yakava iyo nyika yepasi pose yakasimbisa iyo yakawedzera chivimbo chake apo iye akazivisa zita rake kunyika. Gore iroro, kunyanya musi we2nd waDecember, Serge Gnabry akasimbisa mukurumbira wake nea 45 yards mheremhere yekurwisana neLeipzig. Ichi chinotora nguva refu yekutenda chinowanikwa muvhidhiyo iri pasi apa.
Izvi zvakamupa tiketi yajoina Bayern Munich kune avo vakamuwana pa 2nd yaJuly 2018, mazuva 12 kusvika musi wekuzvarwa kwake 23rd. Sezvakatsimbiswa na Hector Bellerin uye Nacho Monreal, muGermany uyo akapomerwa kuti haasi muhutano hweWestBrom pakupedzisira akaratidza kuti vanokakavara havana kunaka.
Serge Gnabry Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Ukama hwaSerge Gnabry hunopukunyuka kuongororwa kwevanhu vose nekuda kwerudo rwake rworudo musambo-pasina. Sezvenguva yekunyora, Serge ane musikana anoshamisika musikana anofamba nezita Sara Kehrer. Tichitarisa kunaka kwake kunofadza, iwe uchaona kuti Sarah zvirokwazvo ndiye mutsindo wakakwana.
Akanaka Sara ndiye muenzaniso weGermany uyewo hanzvadzi yaSerge Gnabry yaimbova mutambo weWerder Bremen muT Thilo Kehrer. Zvose Serge naSara vave vari muukama hwakasununguka kubvira 2016 mumazuva ake okutanga paM Werder Bremen.
Kubatana kwakadzika uye rudo zvose zvakabatana zvinowanzoitwa pachedu sezvo zvifananidzo zvisingawanzobudiswi kumabhadhiro ezveshamwari dzavo. Kune vamwe vafudzi, chimiro chaSara chakasara chisingazivikanwi sezvo Gnabry asina kumbodzidza BAE yake mumutambo. Akamboregirira chithunzi chake nechinyorwa "iye"Uye imwechete rudo loveartart emoji.
Serge Gnabry Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Kuziva hupenyu hwehupenyu hwaSerge Gnabry huchakubatsira kuti uwane mufananidzo wakazara waiye. Chokwadi ndechokuti, Gnabry ndeyepasi pasi pasi munhu. Anoshushikana uye ane hanya, uye ane hanya zvikuru nevanhu pamusoro pemarwadzo uye kutambudzika. Ndicho chikonzero iye pamwe pamwe neshamwari dzenyeredzi dzinoti; Mats Hummels, Juan Mata uye Giorgio Chiellini zvakasayirwa nokuda kwe Common Goal Initiative.
Chinangwa cheNow Goal Initiative ndechekubatanidza pasi rose yemutambo wenhabvu mukurwisana nematambudziko makuru emagariro evanhu munguva yedu.
Nhengo dzezviito izvi dzinoita chibvumirano chekupa chikamu chimwechete kubva muzana chemisha yavo kune boka rose rinotungamirirwa nehurumende isiri yehurumende, StreetFootballWorld.
Achitaura nezvechisarudzo chake chokubatana, Gnabry akambotaura. "Ndinoda kuita kuti ndidzorere chikamu chebhola uye ndinobatsira bhora kuti ndinzwe zvakanaka pamusoro payo zvakare. Ndinoda kuchinja mutambo wacho zvakanaka. "
Imwe nyanzvi yehupenyu hweGnabry ndeyekutenda mukutenda kwake kwechiKristu. Maererano ne Fupa inoshuma, Serge Gnabry anosvika chechi yePurotesitendi uye anoimba kuimba yake.
Serge Gnabry Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Zvimwe Zvinyorwa Hobby & Life Style
Serge Gnabry mukuwedzera kwebhola vanoda Basketball uye anotevera NBA. Ndiye mutsigiri we Lakers uye akapindwa muropa nemararamiro e LeBron James.
In Mharidzo yeBavarian, Serge Gnabry pamusangano wake wekutanga wepagurukota muBayern Munich akapfeka chikwata cheGucci polo yakatanga neLeBron James mu2016.
Chiito chekuunza LeBron James 'swagger kuMunich yakapa mazita ake mazita okuti "Gucci Gnabry kana Pikicha Icon"
Zvaanoita uye anotenga nemari yake:
Chokwadi ndechokuti, hupenyu hwaSerge hwemukati hahuipi huri kunze kwemukati. Dzimwe nguva, anofarira kushandisa mari yake muDhaibha munguva yezororo. Waizviziva here? Serge Gnabry ishizha guru re Dubai Quad Biking Tour. Pasi pane mufananidzo wekutora zororo paRehbab Desert pashure pokunge akatasva dunes nemadhora ake mana.
Panzvimbo pokutenga Lamborghinis, Ferraris kana Bentleys, Serge Gnabry anonamatira kuMercedes. Iye zvino, nguva dzose anogara achionekwa achityaira motokari yake Mercedes Bens.
Serge Gnabry Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Untold Career Facts
Pane imwe nguva, imwe nhoroondo yemuInternet yakambotaura kuti kuguma kwaGnabry semutungamiri wenhabvu kwakauya nokuti baba vake Jean-Hermann (vanoratidzwa pasi apa nemwanakomana wavo) aiva nyika yepasi rose iyo yakatamba nyika yake yeAfrica yeIvory Coast. Kana akanga ari iye?
"Handizivi kuti idzi runyerekupe pamusoro pake rwakabva kupi. Ingongova nhema chete: Haana kumbobvira atamba bhizimisi rekunyora ... " vakadaro Serge Gnabry pavanenge vaita runyerekupe mubvunzurudzo nemagazini yeBrmen's club. Iro runyararo gare gare rakawanikwa rwenhema uye rumwe rwemienzaniso yekutanga ye 'nhau dzakaipa'mumutambo weGermany.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinovonga nekuverenga Serge Gnabry Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Xherdan Shaqiri Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Aaron Ramsey Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Leon Goretzka Utano Nhau Plus Untold Biography Facts